Banaanbaxii cunsuriyiinta Göteborg ka dhigayeen oo goor dhow soo afjarmay | Somaliska
Banaabaxa ay maanta magaaladda Göteborg ee caasimadda labaad ee dalka Iswiidhan ka dhigayeen kooxaha cunsuriyiinta ah ayaa soo dhamaaaday goor dhow, ka dib markii kooxahaasi ay sheegeen iney ka dhaqaaqayaan halka lugu go’doomiyey oo ah agagaarka uu ka socdo bandhigga buuggagta ee Svenska mässan.
Kooxdan oo gaaraysay boqolaal ruux ayaa maanta soo gaaray magaaladda goor ay saacadu ku socotay 12-kii duhurnimo, ayaa waxaa ay bilaabeen markii ay soo gaareen goobta in ay dhagaxyeeyaan booliska oo heegaan ku ahaa goobta islamarkaasina isku dayey ineey riixaan. Naasiyiintan ayaa doonayey ineey socod ku hor maraan halka uu ka socdo bandhigga buuggagta hase ahaatee laga diiday oo ah agagaarka carwadda Lisaberg, waxaana ay keentay in ay xoog ku maquuniyeen booliska hase ahaatee boolisku uu kala hortagay gacan bir ah oo aaneey u suuragalin in ay soo dhaafaan goobtooda.
Dhinaca kale banaanbaxyo kale oo xoogan loogana soo horjeedo kooxdan naasiyiinta ah ayaa waxaa uu ka dhacay meelo kale duwan oo magaaladda ka mid ah, waxaa ugu weynaa banaabaxii ka dhacay Heden oo ay ku sugnaayeen dad kumanaan gaarayey iyo tirro kale oo iagana hor fadhisay cunsuriyiinta. Kuwaas oo ku qeelinayey ereyo ka dhan ah kooahaasi. Maanta gelinkii horena waxaa tiro aqoonyahano ah oo hogaaminayo qoraaga Mattias Gardell ay ku qabteen agagaarka Domkyrkan ee Göteborg, kuwaas oo iyagana muujinayey sida au ugu soo horjeedaan naasiyiinta maanta qal qalka geliyey magaaladda ee banaan baxayey.
Banaanbaxan ayaa waxaa guud ahaan ku dhaawamay 32 ruux, halka 21 ruuux kalena la qabtay. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidanka ammaanka. Magaaladda Göteborg ayaa waxaa laga manuucay in maanta diyaaradaha ay dulmaraan sababo la xirriira diyaaradaha qumaatiga u kaca oo dul wareegayey goobga banaanbaxu ka socday.
Haweeney iswiidhish ah oo dacwad loogu soo oogay soomali ay u soo waday Iswiidhan